Shiinaha EIR SPC sagxadda vinylalkohol saaraha iyo alaab-qeybiye | Karlter
Lagu xardhay Diiwaanka (EIR) Gogosha leh Realfeel Technology
1. Sibiib-ka-hortagga, Cudurka ka-soo-baxa, anti-abrasion-ka heerka sare ah iyo bakteeriyada lidka ku ah
2. Cod nuugista iyo yaraynta buuqa
3. Dabacsanaan sare, badbaado sare
4. Si fudud loo rakibo
5. Qiimaha dayactirka oo hooseeya, oo aan loo baahnayn wax-wax
6. Cimri Dheer
Magaca Gogosha Vinyl (EIR Gogosha SPC)
Midab midab joogto ah ama baarkaaga
Dhumucda guddiga 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm ama loo habeeyay
Xidho dhumucda lakabka 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm sida caadiga ah
Naqshadeynta Dusha sare Veneer (Hard / Softwood) hadhuudh, marmar, dhagax, rooga.
Maqaarka dusha sare EIR
Dhameyso UV (Matt, Semi-Matt, dhalaalaya)
Rakibaadda Guji nidaamka, (Unline / Valinge)
Waqtiga hogaaminta 1 Bil
Cabbir Inji mm
(Ama Loo habeeyay) 7 "* 48" 180 * 1220
Waa maxay dabaqyada 'EIR (Embossed in Register)'?
Waxaa jira ikhtiyaarro dabaqyo aad u tiro badan oo maanta la heli karo taas oo adkaan karta in la doorto sagxadda saxda ah ee gurigaaga ama ganacsigaaga. Horumarka tikniyoolajiyadda ayaa suura galiyay in la helo dabaq muuqaal qurux badan leh oo leh qoryo dabiici ah - laakiin ka sii wanaagsan. Dabaqa EIR Vinyl-ku wuxuu wanaajiyaa qaabkaaga, laakiin waa dayactir sahlan, raagaya oo ammaan u ah qoyskaaga iyo xayawaankaaga.
In yar oo laga sii ogaado noocyada kala duwan ee sagxadda dhulka, sida loo soo saaray iyo nooc kasta xooggiisa iyo daciifnimadiisa waa inay waxtar yeeshaan marka aad go'aan gareyso. Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaad beddesho midabka qolka, rinjiga ayaa si fudud u fudud
Dhammaan Gogosha Vinyl adag ma aha wax la mid ah!
Gogosha vinylalkohol raaxo waa eray guud oo loo isticmaali karo wax kasta oo ka yimaada sagxadda vinylalkohol goglan oo sifiican loo dhisay ilaa realfeel, EIR teknolojiyad casri ah oo sare - dabaqa vinyl-ka.
Embossing waxaa lagu dari karaa inta lagu gudajiro nidaamka kuleylka. Saxan bir ah oo ay ku jirto qaab ayaa lagu riixayaa lakabka dusha sare, isagoo abuuraya raacitaanno la mid ah cirifyada dhagaxa ama qoryaha. Waxyaabaha lagu daro waxaa lagu daraa lakabka sawirka ee fidsan oo laga yaabo ama aan u dhigmin midhaha sawirka alwaaxda ama dhagaxa dhabta ah.
Lagu Dhejiyay Diiwaanka (EIR): Realfeel EIR sagxadda dhulka ayaa ah midka ugu tayada sarreeya - dheeman rajo ah oo ka kooban dabaqyo vinyl raaxo leh. Dareemaha ayaa si fiican ula jaan qaadaya qoryaha lagu sawiray lakabka sawirka.
Hore: dhagsii qufulka vinylka qufulka
Xiga: ku dheji dabaqa vinylka
2.0mm xabagta Down